Ngubani Ochaza iTekhnoloji kwiNkampani yakho? | Martech Zone
Ngubani Ochaza iTekhnoloji kwiNkampani yakho?
NgoLwesithathu, Julayi 8, 2009 NgeCawa, ngoFebruwari 9, 2014 Douglas Karr
Inkcazo yetekhnoloji yile:
ukusetyenziswa kwesayensi kwezorhwebo okanye kushishino
Kwixesha elidlulileyo, ndibuze, "Ukuba isebe lakho le-IT lalibulala izinto ezintsha". Lowo yayingumbuzo owawucela impendulo! Amasebe amaninzi e-IT anakho ukubanakho ukuthintela okanye ukwenza ukuba kwenziwe izinto ezintsha… ingaba amasebe e-IT angade athintele okanye enze imveliso kunye nentengiso?
Namhlanje, bendonwabile ukudibana noChris ukusuka Isihlomelo. Kwakuyincoko yomoya kwaye saye sahamba malunga nemizuzu engama-45 edlulileyo apho sasifuna khona.
Esinye seziqwenga ezinomdla zencoko yayixoxa ukuba ngubani onesigqibo sokuthenga iqonga okanye iinkonzo ze-SEO. Sobabini sancwina xa eso sigqibo sawela ezandleni zommeli we-IT. Andizami nakanye ukujongela phantsi abaqeqeshi be-IT-ndixhomekeke kubuchwephesha babo mihla le. Ukubhloga kweSEO sisicwangciso sokufumana isikhokelo… a uxanduva lokuthengisa.
Nangona kunjalo, kuyamangalisa ukuba isebe le-IT lihlala libekwa ukuba lijongane neqonga okanye inkqubo emisela iziphumo zeshishini. Amaxesha amaninzi, ndibona iziphumo zeshishini (izinto ezintsha, ukubuyela kutyalo-mali, ukusetyenziswa ngokulula, njl. Njl.) Ukuthatha isihlalo sangasemva kwisigqibo sokuthenga.
Xa besikhetha njengeqonga lokubhloga kwequmrhu, ihlala isebe le-IT elikholelwa ukuba linokuphumeza khulula isisombululo sokubloga. Ibhlog yibhlog, akunjalo?
Suyinaka ukuba umxholo awulungiselelwe
Suyinaka ukuba iqonga alikhuselekanga, lizinzile, alinasondlo, alifuneki, njl.
Suyinaka ukuba iqonga alinakulinganiswa kwizigidi zokujonga iphepha kunye namashumi amawaka abasebenzisi.
Suyinaka ukuba inkampani eyakhileyo ichithe amakhulu amawaka eedola kuphando nophuhliso ukuqinisekisa iindlela ezifanelekileyo kunye nokuthotyelwa kweinjini yokukhangela kwafakwa.
Suyinaka ukuba ujongano lomsebenzisi lulula nakubani na ukuba alusebenzise, ​​ngaphandle kwesidingo soqeqesho olunzulu.
Suyinaka Inkqubo iyazenzekelayo ukuze kungabikho lwazi lokumakisha kunye nokuhlelwa ngokwamacandelo okufunekayo.
Suyinaka ukuba abasebenzi bethu bajonge inkqubela phambili yabathengi bethu ukuqinisekisa impumelelo yabo.
Suyinaka ukuba iqonga liza noqeqesho oluqhubekayo lokunceda iiblogger ziphucule izakhono zazo kwaye zonyuse imbuyekezo yazo kutyalo-mali ngokuhamba kwexesha.
Nge-SEO, ihlala ingxabano efanayo. Ndikhe ndaba kwelinye icala lempikiswano ye-SEO, ndikuxelela lonto awudingi ingcali ye-SEO. UJeremy wandikhumbuza ngale post… doh!
Inqaku lam yayikukuba iinkampani ezininzi kakhulu AKUKHO ukulungiswa kweinjini yokukhangela kwaye ziyaphoswa kutrafikhi eninzi efanelekileyo. Ukuba benze nje i ubuncinane, ubuncinci banokubeka loo ndawo intle bachithe i $ 10k phambi kweendwendwe ezimbalwa. Esi sithuba sabhalelwa uninzi lweenkampani ezingenalo ukhuphiswano kwaye kungekho ncedo… yayisisibongozo sokuba ubuncinci benze ubuncinci.
Kwiinkampani kumashishini akhuphisanayo, nangona kunjalo, iipesenti ezingama-80 ezilungiselelwe azisondelanga. I-90% ayonelanga. Ukufumana indawo # 1 kwikota enokhuphiswano kakhulu kufuna ubuchwephesha kwenye yeenkampani ezimbalwa ehlabathini. Ukuba ukwiphepha leziphumo zokukhangela ezikhuphisanayo, isebe lakho le-IT alizukufumana kwi # 1. Uya kuba nethamsanqa ukuba banokukufumana kwiphepha lokuqala leziphumo.
Awunakulibeka isebe lakho le-IT kulawulo lweqela lakho lokuthengisa, ukanti uya kubabeka baphathe itekhnoloji enokuthintela inkampani yakho ekufumaneni intengiso. Ukuba uza kusebenzisa iteknoloji ngokusebenzayo… qiniseka ukuba uphandisisa ngokupheleleyo amathuba kunye nezinto eziluncedo phambi kokuba ucinge ukuba ungayenza wedwa!
Ixesha elide leNtengiso yeQhinga lithatha inkalipho
Ukujongwa ngqo kuthabatha iNkonzo yaBathengi kwiNotshi eNkulu (yeNtlalontle)
Jul 10, 2009 ngo-2: 21 AM
Kukho umhlaba owahlukileyo phakathi kwebhlog iqonga kunye ne-SEO qhinga.
Iqonga lokubhloga liyindibaniselwano yesoftware kunye nezixhobo, kwaye amasebe e-IT alungile ekubekeni ndawonye. Kukwakho nabathengisi abaninzi abenza lo msebenzi, nokuba kungenxa yokuba banesoftware yobunini, okanye ngenxa yokuba sele benazo okanye beqeshisa izixhobo zekhompyutha, okanye ngenxa yokuba banobuchule obuninzi ekugcineni le mpahla ye-IT. Umbuzo wendlela olwahlula ngayo ulawulo lweqonga lakho lokubhloga phakathi kwabantu abangaphakathi endlwini kunye nabantu abathengiswe ngaphandle yingxelo ye-IT "yokuthenga / yokwakha / yokuboleka".
Isicwangciso se-SEO, nangona kunjalo, siphantse sizimele ngokupheleleyo kwiqonga lakho lokubloga. Unokuba ne-SEO enkulu okanye eyoyikisayo ngaphandle kweqonga. Kodwa ukusebenzisa inkampani ye-SEO hayi njengokusebenzisa inkampani ye-IT yomntu wesithathu. Kufana nokuqesha ababhali abanokuguqulela izimvo zakho kulwimi lukaGoogle.
Ngokuqinisekileyo, ungasebenzisa isoftware yebhlog evulelekileyo yasimahla. Kwaye masibe nobulungisa, uDoug -IWordPress iyasebenza kwindawo ekhuselekileyo, ezinzileyo, nezixhobo ezingafunekiyo kakhulu. Abasebenzisi beWordPress babandakanya uDow Jones, The New York Times, People Magazine, Fox News kunye ne-CNN-zonke ezi zigqitha "iimiliyoni zakho zokujonga iphepha, uvavanyo lwamashumi amawaka abasebenzisi". I-Automattic (abantu abenza iWindowsPress) banamashumi ezigidi ze- inkxaso mali, endicinga ukuba luhlahlo-lwabiwo mali olunzulu lophando kunye nobunjineli. I-WordPress ayisiyonto yokudlala.
Nangona kunjalo, iWindowsPress liqonga lokubhloga. Ngokwenyani, kunjalo isiqingatha iqonga lokubhloga-isoftware evulelekileyo yeWordPress (nangona zininzi iinkonzo zokubamba zeWordPress, kubandakanya iWordPress.com.) Ukuba unomdla kulo naliphi na inqanaba lokuthembeka okanye ukonakala, kufuneka utyale imali kwizixhobo ezifanelekileyo kunye nobungcali.
Ke, isebe le-IT lilungile ukuba ibhlog iyibhlog nje kwaye banokusebenzisa izixhobo zasimahla ukwenza ukuba indawo yebhlog iqhubeke. Kodwa uninzi lomsebenzi kunye nexabiso elinokubakho alikho kwisoftware. Phantse inqaku elipheleleyo lokuba nebhlog lenziwe labakho ngesicwangciso esibanzi nesiqhubekayo se-SEO. Nje ukuba uqaphele ukuba yile nto uyifunayo, yinto ekufuneka uzimisele ukuyibhatalela.
Umceli mngeni kukufumana amasebe e-IT ukuba aqonde ukuba i-SEO elungileyo ayisiyonto inamaqhinga angenangqondo, ukuba kunzima, kwaye ihlala itshintsha, kwaye yenza wonke umahluko emhlabeni.
Jul 10, 2009 ngo-2: 52 AM
Andiqinisekanga ukuba uyavuma okanye awuvumelani nam. Mna nawe siyazi ukuba uDow Jones, The New York Times, People Magazine, Fox News kunye ne-CNN abayisebenzisi i-WordPress 'njengoko injalo' Bayayiqhuba ngaphandle kweendleko zoncedo ezongezelelweyo, iindleko zophuhliso lomxholo, iindleko zokwenza injini yokukhangela, njl. Ngaba awucingi ukuba bachitha imali befundisa abasebenzi babo ngokusebenzisa ezo ziqonga? Okanye uphuhliso lokuhambisa umxholo kula maqonga? Ewe kunjalo! Elinye lala mashishini lityale imali encinci ukwenza iplatifti 'yasimahla' isebenza kubo.
Ibhlog yibhlog nje, kodwa iqonga lokubhloga ALIKHO iqonga lokubhloga. Imitha yamagama aphambili, ukuzenzekelayo kokumakisha, ukwahlula ngokwamacandelo kunye nokubekwa komxholo kwiCompendium kukwahlulahlula okukhulu. Ifuna ukuba umsebenzisi achithe ixesha elincinci ekuzikhathazeni malunga 'nendlela' yebhlog, 'njani' ukulungiselela umxholo wabo, kunye nexesha elininzi lokuzikhathaza malunga 'nantoni' kwibhlog. Iiblogi zebhizinisi kufuneka zijolise kumyalezo wazo-hayi iqonga labo.
Ndiyakuqinisekisa ukuba nawuphina umntu angavula i-Compendium kwaye athumele ngeposi kwaye eso sithuba siya kulungiswa. Oku akunjalo nge-WordPress. Uninzi lwabantu endiye ndalifundisa ngokwam indlela yokubhloga ngokukuko ngeWordPress babengenalo nofifi lokuba baphoswa yintoni ngeposti nganye.
Kwakhona, ukugxila kwesebe le-IT akusoloko kugxila kwishishini. Ndihlala ndixabisa oontanga bam be-IT 'ukuphonononga' ukuthengwa kwam kwesoftware ukuqinisekisa ukuba andiyikubeka inkampani engozini; Nangona kunjalo, ngekhe babenakho ukuqonda izibonelelo zeqonga okanye isicwangciso kunye nefuthe laso kwishishini. Ayisiyiyo le nto bafundiselwe yona, ukuba amava abo angaphakathi, nokuba kufuneka basetyenziselwe ntoni.
Vumela oosomashishini benze izigqibo zeshishini! Makube ngabacebisi babo abathembekileyo.
Jul 10, 2009 ngo-4: 32 AM
Andivumelani okanye andivumelani nenqaku lakho liphela, ndicacisa nje izimvo zakho.
Akukho mntu wathi abasebenzisi abakhulu beWindowsPress baqhuba isoftware ngaphandle kokwenza ngokwezifiso kunye neendleko zeziseko zophuhliso. Uthi "ungaze ukhumbule ukuba iqonga alinakulinganiswa nezigidi zokujonga iphepha kunye namashumi amawaka abasebenzisi", kodwa ayiyonyani leyo. Kucacile ukuba kunokwenzeka ukukala iWindowsPress (okanye iBlogger, okanye iDrupal okanye iDotNetNuke okanye iCompendium njalo njalo) kweli nqanaba, kodwa kuya kufuneka utyale imali kwizixhobo zeekhompyuter, ukuxhasa isoftware kunye nobuchwephesha bobuchwephesha. Umbuzo awukho nokuba kunjalo nokwenzeka, nokuba uyafuna ukuyenza ngokwakho okanye ukuba ufuna omnye umntu akwenzele yona.
Ewe, iqonga kubloga nje iqonga kubloga. Yindibaniselwano yesoftware kunye nehardware evelisa ibhlog. Ngokuqinisekileyo, ezinye zinempawu ezahlukeneyo, kwaye ezo mpawu zinokubaluleka ngakumbi kwaye zixabise imali eninzi. Nokuba unayo i-IndyCar, i-BMW epheleleyo okanye ilori ethembekileyo, unemoto enokuqhutywa ukusuka kwindawo ukuya ku-A ukuya ku-B. Ngaba kuyinyani ukuba ezinye zezo zithuthi zilunge ngakumbi kwimisebenzi ethile? Ngokuqinisekileyo. Umbuzo ngulo: ngowuphi umsebenzi ozama ukuwufezekisa?
Ndiqinisekile ukuba xa ubeka umsebenzisi ecaleni ngeCompendium kunye nayiphi na iqonga lokubhloga elinomthombo ovulekileyo, iposi kwibhlog yokuQiniseka iya kuqhuba ukugcwala kwabantu ngakumbi- nokuba izithuba bezingafana negama. Eli lixabiso elikhulu kwinkampani yakho! Ukuba eli tyala lisetyenzisiwe, lenza indawo yokuthengisa emnandi ye-CB.
Kodwa makhe sihlolisise ngoba eso sithuba esinye siya kufumana abantu abaninzi. Isizathu ikakhulu kungenxa yokuQinisekiswa ikhampani inomsebenzi oqhubekayo weqhinga. Uhlaziya ikhowudi yekhowudi ngalo lonke ixesha. Unxibelelana nezithuba zabaxhasi ukubanceda bakhe igama. Udibana nabathengi kwaye ubonelele ngoqeqesho olongezelelweyo kunye nezixhobo. Ugcina iziseko zophuhliso ezinokuthenjwa. Okuninzi, ukuba ayisiyiyo uninzi lwenzuzo yeCompendium ngaphezulu kwesixhobo sasimahla yinkonzo eqhubekayo kunye nenkxaso oyibonelela ngesoftware yakho, abathengi bakho, kunye nomxholo wabo.
Kwaye kwakhona, sisibonelelo esihle kwaye uninzi lwabathengi bakho bonwabile. Kodwa ayisiyonxalenye ibalulekileyo yesoftware kunye nezixhobo "zebhlog yokubloga." Ungafezekisa iziphumo ezifanayo usebenzisa isoftware eyahlukileyo (kodwa iya kuba ngumsebenzi ongaphezulu!) Oku kuyasebenza ziinkampani DK New Media yenza yonke imihla. Nabani na obandakanyeka ekuthathweni kwezigqibo kublogi yequmrhu kufuneka aqonde ezi zinto zahlukileyo.
Umcimbi osisiseko apha kukuphela koxanduva lwesebe elinye kwaye omnye aqale. Akukho mpendulo zilula kulo mbuzo. Okubi nangakumbi, ukuba nayiphi na indawo yalomgca iwela ngaphandle kwenkampani iye kumthengisi weqela lesithathu, kuya kuqala ukubakho iindawo eziphazamisayo phakathi kwamashishini kwaye kuya kusiba nzima ukuvavanya umngcipheko kunye nezibonelelo. Ukhusela njani iperimeter yakho ukuba abantu bangaphandle banokufikelela? Okanye, kwicala lokuthengisa: uqiniseke njani ukuba umboneleli weqonga othunyelwe ngaphandle akazukuphamba kwaye onakalise uphawu lwakho? Obu bungozi bunokuba buncinci okanye bukhulu, kodwa abuyiyo zero.
Ndiqinisekile ukuba izigqibo ezininzi malunga netekhnoloji zenziwa yi-IT ngaphandle kwembeko eyoneleyo kwimpembelelo yeshishini. Kodwa ingxaki ihamba ngeendlela zombini-abantu beshishini kufuneka baqonde ngakumbi nge-IT kwaye ngokuchaseneyo. Ukusebenza kunye endaweni yokuchasana kuya kunceda wonke umntu.
Jul 10, 2009 ngo-4: 48 AM
Enkosi ngaloo ngcaciso, Robby! Ndiza kuma ngezimvo zokugqibela. Ndiyathemba izixhobo zam ze-IT ukuba zibe ngabacebisi bam ukuze ndingenzi into ebubudenge. Nangona kunjalo, andizukubanika isigqibo sokugqibela kumaqonga kunye nezicwangciso ezinomdla wokuqhubela phambili ishishini. Ngamnye wethu unamandla akhe kwaye kufuneka axhotyiswe ngokufanelekileyo.